သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| February 10, 2013 | Hits:14,059
3 | | ရန်ကုန် တရုတ်နှစ်ကူး နဂါးအက ပြိုင်ပွဲမှာ မနှစ်က ပထမဆုရထားတဲ့ Hong Bao Shi အဖွဲ့ ယခုနှစ် ကပြဖျော်ဖြေစဉ် (ဓာတ်ပုံ- ဂျေပိုင်/ ဧရာဝတီ)
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျရောက်သည့် တရုတ်ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွင် တရုတ်ပြည်သူများ အားလုံး ၀မ်းမြောက်ပါကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက် သ၀ဏ်လွှာကို မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကြာသပတေးနေ့က ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဆင်ဟွာ သတင်းက ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသ၀ဏ်လွှာတွင် တရုတ်- မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ဟန်မင်းဆက် ကတည်းက မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ယဉ်ကျေးမှု ကူးလူးဆက်ဆံခဲ့သည့် သမိုင်းရှိခဲ့သည်ဟု ဦးသိန်းစိန်က ရေးသားထားကြောင်း ဆိုသည်။
ထို့အပြင် အေဒီ ၈၀၂ က အထူးသံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တဖွဲ့အဖြစ် ရှေးခေတ်မြန်မာ့အနုသုခုမယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ တန်မင်းဆက်၏ မြို့တော် ချန်အန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကပြ ဖျော်ဖြေမှုများ အကြောင်း တရုတ်ကဗျာ ဆရာ ပိုင်ယုယီက ကဗျာတပုဒ်ရေးခဲ့သည်ဟု ဦးသိန်းစိန်က ဖော်ထုတ်ရေးသည်။
မြန်မာသမ္မတက ဘုံသုံး ဘာသာစကား၊ တူညီသော သွင်ပြင်လက္ခဏာ ယဉ်ကျေးမှုတို့ရှိသော နှစ်ဘက်နယ်စပ်တကြောမှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဝပြောမှုတို့ကို ခိုင်မာစေခဲ့သည်ဟုလည်း ဖော်ပြသည်။
နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရများအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒအပေါ် လက်ကိုင်ပြုပြီး ရင်းနှီးခဲ့ကြကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများတွင် မရှိသော အပေးအယူ ဖလှယ်မှုများဖြင့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု သမိုင်းရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ဆိုထားရာ အနောက်နိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားသော အတိတ်ကာလတွင် တရုတ်အစိုးရ၏ အကူအညီကို ရည်ညွှန်းလိုပုံ ပေါ်သည်။
နောင် အနာဂတ်တွင်လည်း မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် တည်ရှိပြီးသား ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် ဆက်ဆံရေး ဆက်လက် တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည့်အပြင် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိ နေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ အချင်းချင်းလည်း လေးစားမှု အခြေခံသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများလည်း ဆက်စပ်လုပ်ဆောင် နေမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှည်လျား သည့် သမိုင်းစဉ် တလျှောက် သဘောမတူမှုများ ရှိသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံ အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ကြောင့် အစိုးရရောပိုင်း ရော၊ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများပါ ဆက်ဆံရေး မပြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍လည်း မြန်မာပြည်သူများနှင့် တရုတ်ပြည်သူများအတွက် ရင်းနှီးမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု အဓွန့်ရှည်စေဖို့ ဆုတောင်းပါကြောင်းဖြင့် သ၀ဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြွေနှစ်အဖြစ် ကျရောက်သော ယခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးရှိ မြန်မာတရုတ် အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း စည်ကားစွာ ကျင်းပကြသည်။
တိုင်းမ်းမဂ္ဂဇင်း ဦးသိန်းစိန်ကို မျက်နှာဖုံးတင်
အကြမ်းဖက်မှုများ ပြတ်သားစွာ အရေးယူရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို သမ္မတ အမိန့်ပေး
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ တရုတ်ကြီးစိုးမှုက ရုန်းထွက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်ဟုဆို
ဒီမိုကရေစီ ခရီး အတူလျှောက်လှမ်းရန် မွေးနေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Sai Linyone February 10, 2013 - 7:42 am	Where did Thein Sein learn this Chinese-Burmese relationship history? I thought he did not finish primary education. Or he just guessed what he heard from Suu Kyi?
Reply	ဗမာ February 11, 2013 - 10:02 am	နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရများအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒအပေါ် လက်ကိုင်ပြုပြီး ရင်းနှီးခဲ့ကြကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများတွင် မရှိသော အပေးအယူ ဖလှယ်မှုများဖြင့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု သမိုင်းရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ဆိုထားရာ အနောက်နိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားသော အတိတ်ကာလတွင် တရုတ်အစိုးရ၏ အကူအညီကို ရည်ညွှန်းလိုပုံ ပေါ်သည်။
မှန်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီလို့ကမ္ဘာက၀ိုင်းပယ်(ကြဉ်)ထားတဲ့ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေ သက်ဆိုးရှည်အောင်၊အသက်ဆက်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ တရုပ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေပေါ်မှာကြီးမားသလောက် ကျုပ်တို့လို သာမန်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ကို ဆင်းရဲတွင်းကြာရှည်နစ်အောင်၊ မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာနာမည်ဆိုးနဲ့လူသိများအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ တရုပ်ကြီးရဲ့ အတ္တ၀ါဒီစိတ်ဓါတ်တွေကိုလည်း ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်သူတွေ တသက်မမေ့ပါဘူးဗျာ။ မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်။ အနာဂါတ် မြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းဖတ်စာမှာ အဲဒီအကြောင်းကို ပြဌာန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
Reply	မြန်မာပြည်သား February 11, 2013 - 10:28 am	ကိုယ့်ပြည်တွင်း က တိုင်းရင်းသားပွဲတွေ ကျတော့ ဒီလို တစ်ခါမှ သဝဏ်လွှာ မပေးပို့ပေးပါဘူး။
Reply	Lulay February 11, 2013 - 5:13 pm	This is cheap greetings and wishes at the expense of the public. Instead he better sends me for my birthday.
စီးပွားရေး အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဂျာမနီကို ဦးသိန်းစိန် ကမ်းလှမ်း
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် ၀န်ကြီးများ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင် ဖြစ်မှု အငြင်းပွား
ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း အဓိက ဟု ဦးသိန်းစိန် ပြော
လွှတ်တော်နှင့် ဆက်ဆံရေး ပြေလည်ရန် သမ္မတက ဆပ်ကော်မတီများ ထပ်ဖွဲ့
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ မြေမသိမ်းဟု ကတိပြု
ဦးရွှေမန်း ပြောဆိုချက် အစိုးရသတင်းစာ ဝေဖန်